Kaambiriij Anaalitikaa: Sassaabaan odeeffaannoo feesbuukii cufamuufi - BBC News Afaan Oromoo
Kaambiriij Anaalitikaa: Sassaabaan odeeffaannoo feesbuukii cufamuufi
3 Caamsaa 2018
Naqaan Kaambiriij anaalitikaa waajira Landanii qabu irra buufameera.
Dhaabbatni gorsaa siyaasaa kaambiriij anaalitikaa basaasa odeeffannoo feesbuukii keessatti hirmaate jedhame cufamaa jira.
Dhaabbatichi karaa seeraan alaa odeeffannoo namoota dhuunfaa maamiloota siyaasaa isaaf jecha itti fayyadamaa tureera.
Akka odeeffaannoo Kaampaanii Feesbuukitti yoo tahe odeeffannoon maamilootasaa miliyoona 87 tahanii eeyyyama kaampaanichaa malee karaa appilikeeshiinii gaaffii ykn quiz app walitti qabamee gorsa siyaasaa mataasaaniif darbera.
Camdaan hawwaasummaa ykn social network kun qorannoosaa itti fufuu ibseera. Dubbii himaan kaampanichaa kun kaka'umsa fi kutannoo keenya hin jijjiiru, maaltu akka raawwates guutummaatti ni hubannaa irra deebi'ees hin uumamu jedhe.
''Abbootii taayitaa isaan ilaallatu waliinis dhimmicha qorachuu itti fufna'' jedhe.
Himannaawwan kaampaanii kaambiriiji irratti banaman maal turan?
kaampaanichi odeeffaannoo fayyadamtoota feesbuukii miliyona 87, bu'aa filannoo Pirezedaantummaa Ameerikaa bara 2016 fi Rifirendamii sagantaa BREXIT to'achuuf fayyadameera jedhamuun himatame.
Ji'a caamsaa darbe keessa hojii gaggeessaan kaampaanichaa Aleeksaandar Niksi, karaa chaanel 4 fakkeenyota fudhachuun akkamiin dhaabbatnisaanii filannoo adunyaa hundaa karaa harka wayyaa jalaan tooftaa garaagaraa fayyadamee akka to'atu himetti himee ture.
kaampaaniin Uk keessatti argamu kun yakka tokkollee hin qabu muuxannoo guddaa filannoo biyyota biroo akka Xaaliyaanii, Naayijeeriyaa fi Keeniyaa keessatti hojjechuu qaba jechuun himannicha haaleera.
Maaliif ni cufama jedhame?
Kilireensi miisheel,dubbii himaan kaampaanichaa karaa weebsaayitii kaampaanichaa akka ibsetti ,ji'oota darbaniif Kaambiriij Anaalitikaa himata ragaa hin qabnee baay'eedhaan himatamaa turera.kaampaanichi dhimmicha sirreessuuf dhama'ullee maqaan kaampaanichaa baduun akka qabiyyee beeksisaa gochaawwaan siyaasaa fi daldalaatti waan ilaalameef cufuuf murteesine jedha.
Gabaasni miidiyaalees maamiloota keenya hedduu nu dhabsiisera jedhan.
Dabalataan ejjennoon kaampaanicha kan hin sochoone tahullee,hojjettotnisaa naamusaa fi seera qabeessummaan akka hojjetaa jiran ibseera.
kanarraa kan ka'e kaampaanichi hojii biizinesii isaa itti fufee akka hin hojjenne murteessera.
Itti dabaluun maatii kaampaanichaa kan tahe SCL adeemsa kisaaraa keessa galee jira.
Baatii lamaan dura Ogganaa mummeen Kaambiriji Anaalitikaa Aleksaandar Niksi harii'atamuunsaa ni yaadatama
Abbaan qabeenya Feesbuuk Zuukarbarg seera ragaa caberratti dhiifama gaafate
Hoogganaan Feesbuuk amantaan ragaa maamiltootaa eeguurratti cabe jiraachuu amanuun qabannaa ragaa namoota dhuunfaarratti akka hojjetu beeksisera.
22 Bitooteessa 2018
Dhohiinsa Beeyiruutiin lammiilee Itoophiyaa miidhaan irra gahe
Mallasaa Dirribsaa, Yaasiin Jumaa fi kaanis wabiidhaan akka bahan murtaa'e
KALLATTIIN Lakkoofsi namoota akka addunyaatti Covid-19n du’an 700,000 caale
"Du'eera jedhanii kosii keessatti na gatanii deeman" - Jaagamaa Taaddalaa
31 Adooleessa 2020
Naannoo Tigraayitti humnoonni nageenyaa agarsiisa waraanaa taasisaan
Maallaqni baankiitti jalaa ugguramuun maatii namoota hidhamanii 'rakkoof saaxile'
Obbo Daawud maaliif manaa bahuu dhorkaman?, akkamiin hojiitti deebi'an?
1 Hagayya 2020
Jawar Mohaammed dhimmi hidhameef 'kan mana murtiitti ilaalamu miti' jedhe
30 Adooleessa 2020
Abdii Raggaasaa irratti galmeen haaraatti akka banamu manni murtii hayyame
29 Adooleessa 2020
Viidiyoo, 'Hamilee kootu na tuqame' - Hayilee G/Sillaasee, 3,27
Af-gaaffii Afaan Tigree MM Abiy, yaada dhalattoota Tigraay fi lammilee Eertiraa
Libaananiitti dhohiinsa guddicha mudateen 100 ol yoo du'an, 4000 ol madaa'an
Qorannoon Obbo Baqqalaa Garbaa goolabamee 'galmeen qorannoo duraa' baname
Masriin marii Hidha Haaroomsa Guddicha Abbayyaa eegalamee keessaa bahuu ibsite
Dhohiinsa Beeyiruut lubbuu nama 100 olii galaafate suuraan
'Dhumni addunyaa akkam akka ta'e baruun haara galfiidha'
'Haaduu kiisii baasuun funyaan kiyya narraa mure'